သိပ္ပံပညာရှင်များ ဗုဒ္ဓ၏စွယ်တော်(သွား)ကို စစ်ဆေးကြခြင်း | The Noble Eightfold Path
သိပ္ပံပညာရှင်များ ဗုဒ္ဓ၏စွယ်တော်(သွား)ကို စစ်ဆေးကြခြင်း
ဗုဒ္ဓ ပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက ( BC 623 ) ဆိုတော့…
ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊
မိုဟာမက် ပေါ်ခဲ့တာက ( AD 570 ) ဆိုတော့
ဗုဒ္ဓက မိုဟာမက်ထက်လဲ နှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့ ၊
ယခု တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ စွယ်တော် ( သွား ) ရဲ့
သက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း ( ၂၆၃၃ ) နှစ် ရှိနေပါပြီ။
အဲဒီလောက် သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို့ က
အဲဒီသွားကို Genetic Engineering နည်းနဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးလိုပါတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုလို့ 
တရုတ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တို့ စမ်းသပ်တွေ့ ရှိချက်တွေကတော့…..
( ၁ ) ဒီသွားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၂၆၀၀ ) ခန့် က သွားဆိုတာ မှန်ကန်ပါတယ်တဲ့။
( ၂ ) လူသားတဦးရဲ့ သွားဆိုတာလဲ မှန်ကန်ပါတယ်တဲ့ ။
( ၃ ) ၎င်းသွားထဲမှာပါတဲ့ DNA(Deoxyribo Nucleic Acid) ဟာ သာမန်လူသားတဦးရဲ့ DNA နဲ့ မတူဘဲ
Supreme Lord ( အမြင့်မြတ်ဆုံး အရှင်သခင် ) ရဲ့ DNA အဖြစ် ကောက်ချက်ချပါတယ်တဲ့။
အဲဒီသိပ္ပံတွေ့ ရှိချက် ထွက်လာစဉ်မှာဘဲ အနောက်အုပ်စု အစိုးရတွေက
သူတို့ ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို စမ်းသပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ဖို့ အမိန့် ထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကမ္ဘာကျော်သွားမှာကို မဖြစ်စေချင်လို့ ပါတဲ့။
အနောက်အုပ်စု/ အမေရိကန် နှင့် တရုတ် တို့ပါဝါ ပြိုင်နေချိန်လဲ ဖြစ်နေတယ်လေ။
သိပ္ပံပညာ တိုးတက်မှုဟာ ဒီနေရာမှာကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ကောင်းမွန်နေပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ ရေ………..
ဒါနကထာ တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ဆင့်ပွားချက်လေးပါ။
This entry was posted on October 29, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဓမ္မသတင်းလွှာ .
It isainfinite message that has enveloped my self — the inner self. Peace and Metta only emerges in the practice and utmost endeavour by one in and with the Buddha, the Dhamma and the Sangha.
Thar Du Thar Du Thar Du
ဒီသတင်းဟာ ခိုင်မာမှု ရှိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်….ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက စစ်ဆေး တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါဘူးဖြစ်နေပါတယ်…
အထက် mraminzan ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအထောက်အထားပြည့်စုံရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းမှာပဲ ဒါပေမယ့်လည်းအများပြောသလိုပေါ့ ယုံကြည်ရင်ကုသိုလ်ပေါ့ ဆိုပေမယ့်လည်း တကယ်စမ်းသက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီစမ်းသက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့သိချင်တာပေါ့ဗျာ မယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒါလူသဘာဝဘဲလေ ဒါပေမယ့်ကျတော်အမြင်တော့ ဒီလိုစမ်းသက်ခွင့်ကိုတရုတ်အစိုးရကခွင့်ပြုပါ့မလား ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီတသင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြန်ပါ့မလား သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေသတင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ဖို့ဆိုတာ မှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေ နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြသနာတွေအတွက် အများကြီစဉ်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် ဒါကဘာသာရေးဖြစ်နေတာကို…………………………
ပုံတော်မှာ ဘွဲ့တော်ရေးတာမှားနေပါတယ်။သီတဂူဆရာတော့်ပုံတော် ကို သပိတ်အိုင်ဆရာတော်ကြီး လို့ရေးထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာဇြင့်
အလွန်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့ယုံပါတယ်။ ဒီထက်အချက်အလက်ပိုပြည့်စုံရင် အလွန့်အလွန်ကိုဝမ်းသာရမှာပါ။